--Tali - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Echere na otu n'ime ọrụ kachasị mma nke Michelangelo na otu n'ime akụ kachasị ukwuu nke Vatican, Sistine Chapel ...
Ihe ị ga-ahụ na obodo Italy nke Syracuse
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ ma mee n’obodo Itali nke dị na agwaetiti Sicily, Siracusa, ebe nwere ọtụtụ akụkọ ntolite.
Choputa ihe anyi nwere ike ihu n’obodo Polignano a Mare, na mpaghara Italy nke Puglia, ya na oke osimiri ya.
Anyị na-egosi gị ihe niile ị nwere ike ịhụ na nleta nke obodo Itali nke Genoa, obodo nwere ọdụ ụgbọ mmiri na obodo ochie mara mma.
Catacombs nke Saint Callisto
Nke a bụ ụlọ ụka Senti Peter na dome ya
N’etiti Rome, Vatican bu etiti ulo uka Katoliki na ala pere mpe ...
Chọpụta ụfọdụ ebe dị mkpa aga - agarịrị na Italytali. Great obodo na anyị ga-enwe na anyị njem ndepụta.
Na Actualidad Viajes, anyị chọrọ ịmara ebe ọhụụ na nke mara mma, dịka nke a na Tropea, ọla thattali ị ga-achọ ịga leta mgbe ị gụsịrị nke a.
Edeela ọtụtụ ihe banyere Venice, obodo canals. Kinddị ụlọ ihe ngosi nka nke ghere oghe maka ...
Venice ga-amachibido ohere ịbanye na St Mark's Square
A maara n'asụsụ mbụ ya dị ka Piazza San Marco, ogige a nke Venetian bụ ma eleghị anya ebe nnọchi anya kachasị nke ...
Mgbe ezigbo ihu igwe rutere, anyị achọworị ịga n'ụsọ osimiri, ebe ọ bụ na a maraworị ndị nọ n'ógbè anyị, anyị ...
Taormina bụ otu n’ime obodo ndị kachasị mma na Sicily niile, nwere okporo ámá oge ochie na ọmarịcha echiche nke oke osimiri na Etna.
Nleta ime nso Rome
Chọpụta ugboro ise na nso Rome ị nwere ike ịme ma ọ bụrụ na ị gaa obodo ahụ, site na Pompeii gaa Villa del Este mara mma ma ọ bụ Herculaneum.
Ọ bụrụ na ị ga-eleta Vatican City n'oge na-adịghị anya, ebe a ka anyị ga-ahapụrụ gị ndụmọdụ izugbe na, nke kachasị mkpa, koodu uwe ya.
Chọpụta nleta na-atọ ụtọ na nso obodo Florence, iji fuo na obere obodo dị na Tuscany ma ọ bụ n'akụkụ ụsọ oké osimiri.
Chọpụta asaa kasị mma ebe na Italy, si obere ala gbara osimiri okirikiri obodo ndị kasị mkpa obodo ndị jupụtara ncheta.
Ọ bụrụ na ị gaa Sicily, ị gaghị echefu Agrigento, ebe pụrụ iche nke yiri Gris oge ochie nwere nnukwu ihe ncheta na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
Chọpụta ebe ole na ole ihunanya nọ n'Italytali, ebe ndị ị maara nke ọma na ndị ọzọ bụ ebe a na-eme ihe nkiri ịhụnanya.
Sicily, ihe ị ga-ahụ n’oge njem agwaetiti ahụ
Sicily, agwaetiti Italiantali na Mediterenian nke nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ, site na obodo ndị mara mma gaa na mbara ala dị egwu dịka Etna.
Mpaghara Tuscany dị n’ istali bụ ebe jupụtara n’akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na ọdịdị ala mara mma, yabụ anyị ga-ahụ obodo ndị bụ isi.
Amalfi Coast bụ njem nleta ama ama na touristtali. Na obodo mara mma nke na-eleghara oké osimiri anya site na ọnụ ugwu na ebe iji chọpụta.
Anyị chọpụtara osimiri ise mara mma na Sardinia bụ ezigbo paradaịs na Mediterranean iji nwee ezumike.
Obodo nke Milan nwere ihe ncheta mara mma na ọtụtụ oghere ị ga-aga, yabụ ọ nwekwara ike ịbụ ezigbo njem njem.
Choputa Corleone, obodo di na Sicily nke ejikọrọ na mafia ndi Italia. Ọ bụ eziokwu na ihe nkiri na akwụkwọ agụpụtara?
Florence, obodo nke juputara na nka
Florence bụ otu n’ime obodo ndị ama ama n’Itali, ebe nwere nka na akụkọ ihe mere eme n’okporo ámá ya. Chọpụta nleta ndị dị mkpa ị ga-ahụrịrị.
Kemgbe mbibi ya na AD 79, Pompeii kpaliri mmasị gburugburu ụwa. Kwa afọ, ọtụtụ nde ndị njem na-abịa totali ịhụ ya.
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Colosseum dị na Rome, nke a makwaara dị ka Flavian Amphitheater. Miss gaghị agbaghara nkọwa nke a ga-ahụ na Italy
Strada della Forra, sinik okporo ụzọ Lake Garda
Rimini osimiri bụ otu n'ime ihe ndị kasị ama n'oge okpomọkụ tụrụ na Italy. Ọ bụ osimiri jupụtara na obi ụtọ.
Il Porcellino, ihe ndabara nke Florence
Ihe nnọchianya nke Florence bụ obere ọla ọla a na-akpọ Il Porcellino
Osimiri Tropea na Italytali
Osimiri Tropea dị na Oké Osimiri Calabrian, nke dị n’ Italytali, ọ bụkwa ebe pụrụ iche.
Costa Smeralda, mpaghara nhọrọ ndị njem okomoko na Sardinia
A na-akpọ Emerald Coast n'ụsọ oké osimiri nke mpaghara Sardinia nke Gallura, nke dị n'ógbè Olbia-Tempio.
Aka nri nke ikiri ụkwụ nke nnukwu akpụkpọ ụkwụ ahụ na-egosipụta ọdịdị ala nke istali bụ otu n'ime mpaghara mara mma na-amachaghị ama nke mba ahụ: La Puglia. N'ebe a, anyị ga-ahụ oke osimiri ndị owu na-ama, obodo ndị mgbe ochie na-ese ọcha na ọdịnala dịka ha dị ịtụnanya.
Ihe oyiyi Rome ochie
Taa, anyị na-ekwu maka ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke Alaeze Ukwu Rom
Osimiri mara mma nke Scala dei Turchi na Sicily
Scala dei Turchi, "steepụ nke ndị Turks". Nke ahụ bụ aha ihe ọtụtụ bụ oke osimiri kachasị mma na Sicily. A kọwara aha ahụ nke ọma mgbe anyị gara na ya: o yiri ka okwute ndị ahụ ọ na-ese steepụ ma ọ bụ nke a bụ ihe ndị ohi Turkey nyere iji zuo oke osimiri agwaetiti ahụ na narị afọ nke XNUMX.
N’afọ 1910, e wuru nnukwu ihe oyiyi n’akụkụ osimiri Liguria ,tali, nke dịdebere obodo Monterosso. Ọ bụ onye 14 mita-elu nke chi Neptune n'ụdị oge gboo nke ga-edozi echiche nke Villa Pastine. Mbibi nke oké osimiri na bọmbụ ndị jikọrọ aka na Agha IIwa nke Abụọ emebiwo Monterosso Giant nke ukwuu, n'agbanyeghị na ihe niile bụ otu n'ime ebe ndị kachasị mma na mpaghara a.
Palmanova, obodo Italy nke nwere kpakpando
Renaissance mekwara ka e nwee mgbanwe n’uche nhazi obodo n’obodo Italytali. N'ebe ahụ ka e mepụtara usoro mgbidi ọhụrụ maka obodo ndị nabatara ọganihu ndị agha n'oge ahụ, nke dị iche na nke oge ochie. Otú a ka amụrụ mgbidi nke kpakpando nwere okpuru ulo na nkuku mechiri emechi dika nke obodo Palmanova, di nso na Venice.
Tuscany ()tali): mpaghara nwere akụkọ enweghị atụ na ụdị okike
Tuscany nwere ihe ùgwù inwe ọtụtụ obodo na obodo ndị nwere oke mara mma na ọgaranya akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị ọdịnala.
Rabbit Bay (Italy): chọpụta paradaịs Mediterenian dị nso na Sicily
Agwaetiti Lampedusa dị n’Oké Osimiri Mediterenian, bụrụ ebe ugwu ugwu Europe, ebe ọ bụ na ọ dị nanị 167 kilomita. n'ụsọ oké osimiri nke Tunisia.
The kacha mma ịgba ọtọ osimiri na Italy
Depụta na ise kacha mma nudist osimiri n’ Italytali.
Abalị Pink ahụ dị na Rimini
Kwa July, obodo Rimini na ụsọ osimiri Adriatic dum nke mpaghara Romagna dị na Italytali bụ nke nwere agba: pink, nke na-enwu ụlọ ndị ahụ n'abalị, na-eme n'okporo ámá na ihe ncheta ma na-abanye n'ime ndụ. puku ụzọ. Ọ bụ Notte Rosa (nke Pink Night), otu n'ime nnukwu ememme mmemme nke oge okpomọkụ Italiantali.
Na-eche echiche nke inwe ọ getụ ịhụnanya? Ọ bụrụ otu a, enwere m ozi ọma dịịrị gị, maka na onyinye ndị a ...
Nnukwu ụlọ na Tuscany, Italy
Anyị na-aga mpaghara Italy nke Tuscany iji hụ ụlọ ndị mara mma anyị nwere ike ịhụ na ya
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na Tuscany
Anyị na-aga Tuscany, nke dị n'Italytali, iji hụ ụfọdụ mmiri ịsa ahụ ya, nke dị mma maka njem nlegharị anya
Anyị na-aga njem anyị ma anyị ga-anọ na Europe, oge a anyị ga-ezute otu n'ime ...
Mpaghara, n'okporo ámá na ebe ndị a na-ahụkarị na Naples na Italytali
foto Ebe E Si Nweta: seleniamorgillo Otu n'ime isi n'okporo ámá ndị dị n'etiti Naples bụ Via Toledo, afọ ole na ole gara aga a na-akpọ…
Nkwenkwe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na a na-eme emume Katọlik mbụ na Santa Maria na Trastevere, na Rome. Nke a na chọọchị ...
Ndị kasị mma ice cream parlor na Rome
Otherbọchị gara aga m na-ekwu na dịka French si kwuo, Berthillon ice cream parlor na Paris na-eme ice cream kacha mma n’ụwa. Mana…
iAudioGuide na-enye ntuziaka ọdịyo n'efu nke isi obodo Europe
Ike gwụrụ gị iburu onye ndu gị mgbe niile? Na iAudioguide ị nwere ike ị listena ntị na ndu ndu gị mgbe ị na-agagharị ...